Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 20
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 20)
Barcelona Oo Qorsheyneysa Inay Heshiis Cusub ka saxiixato daafac muhiim u ah.
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadalo la gashay xidigooda daafaca ka ciyaara ee Umtiiti. Kooxda ayaa dhowaan wadahadal la furtay wakiilka ciyaaryahanka si ay u cusbooneysiiso qandaraaskiisa, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo. Umtiti waxa uu qandaraas kula jiraa kooxda reer Catalan ilaa iyo 2021 laakiin heshiiska uu haatan kula joogo waxaa lagu sheegay in € ...
Bayern Munich oo xiiseyneysa xidig united-ka u ciyaara.
Naadiga Bayern Munich ayaa noqotay kooxdii ugu dambeysay ee lala xiriiriyo xagaagan si ay u soo qaadato weeraryahanka Manchester United Anthony Martial. Mustaqbalka laacibka Faransiiska ee Old Trafford ayaa aheyd mid la yaab leh oo la xiriirta mustaqbalkiisa, sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda heysata horyaalka Jarmalka ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo doonaya saxiixiisa. Martiali ayaa la ...
Manchester City oo £ 50m ku dooneysa Weraryahan Premier League ka ciyaara.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay dalab u dirto xiddiga Crystal Palace Wilfried Zaha. Sida laga soo xigtay The Sun, Sky Blues ayaa diyaar u ah inay 50 milyan oo ginni kula soo wareegto xiddiga reer Ivory Coast, lakiin waxa ay tartan kula jiraan kooxo kale oo Premier League ah. Tottenham Hotspur, Arsenal iyo Chelsea ayaa sidoo ...
James Palotta: ‘Alisson kama tagayo Roma’
Madaxweynaha Kooxda Roma James Palotta ayaa ku celiyay in goolhayaha reer Brazil Alisson uusan ka tagi doonin kooxda xagaagan. Alisson ayaa si aad ah loola xiriirinayey labada kooxood ee Liverpool iyo Real Madrid, iyadoo labadoodaba ay rumeysan yihiin inay isku diyaarinayaan dalabyada dhamaadka xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha ahaatee, Palotta ayaa ku adkeysanaya inaysan jirin fursad uu 25 jirkaan kaga ...
West Ham United oo jidka u gashay kooxda Stoke Ciy, Kulan dhibcaha la wadaagay.
Kooxda West Ham United ayaa bareejo 1-1 ah la dhaafi waysay dhigeeda Stoke City ciyaar ku tirsaneyd Horyalka Ingiriiska oo labada koox ku dhex martay London Stadium. Stoke oo u baahneyd guusha si ay uga baad-baado heerka labaad ayaa goolka hore ku horeeysay waxaana daqiiqadii 79aad u saxiixay Peter Crouch oo ciyaarta ka dhigay 1-0. West Ham oo dadaal dheer sameeyay ayaa ...
Kooxaha reer Milan Oo Ku Dagaalamaya Saxiixa xidig Ajax u ciyaara.
Kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa weeraryahanka kooxda Ajax David Neres dhamaadka xilli ciyaareedkan. 21-sano jirkaan ayaa horeyba lala xiriirinayay Manchester United, Tottenham Hotspur iyo Arsenal, waxaana uu dhaliyay 12 gool, waxaana uuna caawiyay 13 gool 35 kulan oo uu u saftay Ajax xilli ciyaareedkan. Weeraryahankan ayaa ku biiray Ajax bishii Janaayo ...
Juventus oo isha ku heysa saxiixa Filipe Luis.
Kooxda reer Taliyaani ee Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso inay u dhaqaaqdo daafaca Atletico Madrid Filipe Luis dhamaadka xilli ciyaareedkaan. Luis ayaa ku biiray Atletico Madrid oo uu kaga soo biiray Deportivo La Coruna xagaagii 2010, waxaana uu muddo afar sanno ku qaatay kooxda Madrid ka hor inta uusan u dhaqaaqin Chelsea ka hor xilli ciyaareedka 2014-15. ...
Dembele: “Waxaan joogi doonaa Barca mudo dheer”
Weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele ayaa ku adkeysanaya inuu joogi doono kooxda LaLiga “muddo dheer” inkastoo uusan weli qaab ciyaareed fiican ku jirin. Dembele, oo 20 sanno jir ah, ayaa Barcelona kaga soo biiray Borussia Dortmund bishii August sannadkii hore isagoona ugu soo biiray aduun fhan € 105million. Si kastaba ha ahaatee, dhaawac muruqa ah oo soo gaaray xilli ...
Liverpool oo u dhaqaaqday saxiixa xidig Sporting Lisbon u ciyaara.
Naadiga Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal la bilowday Sporting Lisbon saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Bruno Fernandes. 23 jirkaan ayaa ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee Sporting xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 13 gool, isagoona caawiyay 18 gool tartamada oo dhan. Inkastoo afar kulan oo kaliya uu u saftay Portugal, Fernandes ayaa la rumeysan yahay ...
Da,yarta Somaliya oo helay 3-dhibcood iyo Etopia oo la ganaaxay.
Xiriirka Kubadda Cagta Bariga iyo Bartamaha Afrika ee SECAFA ayaa Soomaaliya u soo celiyay saddex dhibcood iyo saddex gool kaddib markii xulka Itoobiya lagu helay in ay ciyaarsiiyeen ciyaartooy ka weyn da’da loo baahnaa. Tartanka Kubadda Cagta ee Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa ka socda Dalka Burundi waxaana ciyaaraya ciyaartooyda ay da’doodu ka hooseyso 17 jirrada. Baaritaan ...
Michy Batshuayi oo shaki la galiyay ciyaaristiisa Koobka Aduunka sabab?
Tababaraha Borussia Dortmund Peter Stoger ayaa xaqiijiyay in Michy Batshuayi “uu maqnaan doono muddo dheer” iyadoo dhaawaca uu ka soo gaaray kulankii Schalke 04. Weeraryahanka amaahda ku jooga Dortmund ayaa ka tagay Veltins-Arena isagoo dhutinaya waxaana uu muujinayay dhawaca soo gaaray. Ciyaaryahanka heerka caalami ee xulka Belgium Batshuayi, oo 7 gool u dhaliyay Dortmund tan iyo markii uu ...